Maro no ho any amin'ny Fanjakan'ny lanitra
Naseho ny : 2 desambra 2019
Alatsinainy 02 desambra 2019 - Herinandro voalohany amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 8, 5-11.
Ny Tompo no Mpanjakantsika, Izy no hamonjy antsika.
Naseho ny : 1 desambra 2019
Alahady 01 desambra 2019 - Alahady voalohany amin'ny Fiavian'ny Tompo
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 24, 37-44.
Asehoy anay ry Tompo ny famindram-ponao, ary omeo anay ny famonjena avy aminao.
Pejy 62 amin'ny 62